R/wasaare Gaas oo galabta ku laabtay Muqdisho, kana tacsiyeeyay dilkii shaqaalaha gargaarka. – Radio Daljir
Diseembar 30, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Dec 30 ? Waftigii dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayey R/wasaaraha Soomaaliya, kuna sugnaa Puntland ayaa gaaray magaalada Muqdisho kadib socdaal qaatay laba todobaad oo uu ku maray magaalooyin ka mida Puntland.
Wafdiga ayaa intii ay ku sugnaayeen Puntland waxa ay Garoowe kaga qayb-galeen shirkii Soomaaliya ee arrimaha dastuurka, sidoo kalena waxa ay booqdeen xarumo badan oo isugu jira kuwa dawladda iyo hay’adaha cilmiga oo ku yaal gobollada Nugaal, Karkaar iyo Bari ee dawladda Puntland. Markii uu ku noqday Muqdisho ayuu Ra’iisul-wasaare Gaas waxa uu warfideeynka u sheegay in ay ka soo maqsuudeen safarkoodii, isla markaana waxa uu ku tilmaamay “mid guul ku soo dhamaaday”
Ra’iisul-wasaare Gaas waxa uu sidoo kale ka tacsiyeeyay dilkii maanta (Jimce) Muqdisho lagu dilay laba ka tirsan dhakhaatiirta hay’adda MSF, wuxuuna ku tilmaamay arrin ay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba aad uga naxeen kana xunyihiin.
Waftigaan oo uu hoggaaminaya R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? ayaa iskugu jira wasiirro, xildhibaanno iyo saraakiil kale oo ka tirsan dawladda federaalka kuwaasi oo ay ka mid yihiin labo ka mid ah ku-xigeennada R/wasaaraha ahna wasiirrada gaashaandhigga iyo ganacsiga.
Mas?uuliyiintaan dawladda federaalka oo muddo dhawr maalmood ah ku suganaa magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari, ayaa halkaasi u tagay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen u kuur-galidda xaaladaha kala duwan ee deegaannada Puntland, gaar ahaanna amniga iyo arrimaha hormar ee bulshada, waxaana waftigu si hoose u darsayeeen baaxadda dhibaatadii burbur-habtiyeed ee ka dhalatay gubashadii suuqa Bossaso.
M/weynaha dawladda Puntland iyo madax kale oo ka tirsan golayaasha dawladda Puntland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Bossaso ku sii sagootiyey waftiga R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas?.
Ma ahan markii ugu horraysay oo R/wasaare Gaas iyo wafti federaal ah oo uu hoggaaminayaa ay yimaadaan Puntland, waxaana aad u kobcay xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka tan iyo intii mudane Gaas loo magacaabay R/wasaaraha Soomaaliya.
Waftigii R/wasaare Gaas ee ku sugnaa Puntland oo soo gabagabeeyey booqashadoodii, mardhawna la filayo in ay Muqdisho u dhoofaan.
Bossaso, Dec 30 ? Waftigii dawladda federaalka ee indhawaale ku sugnaa deegaannada Puntland ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyey socdaalkoodii Puntland, kuwaasi oo la filayo goordhaw in ay ka dhoofaan magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari, iyagoo u kicitimaya magaalada Muqdisho.
Waftigaan oo uu hoggaaminayo R/wasaaraha dawladda federaalka Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? ayaa Puntland ku sugnaa muddo ka badan 10 cisho, kuwaasi oo socdaal xagga dhulka ah ku tagay dhawr gobol oo Puntland ah.
Waftiga dawladda federaalka ee R/wasaare Gaas oo ay ka mid yihiin labo ka mid ah ku-xigeennadiisa oo ah wasiirrada gaashaandhigga iyo ganacsiga iyo xubno kale oo golayaasha dawladda ah ayaa dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Bossaso iyagoo intii ay joogeenna kormeer ku tagay goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin, Airportka, dekedda, maxjarka xoolaha, suuqii gubtay iyo fariisimada ciidamada amniga Puntland ee gobolkaasi.
Madaxda dawladda federaalka oo ay weheliyaan madax sare oo Puntland oo uu hoggaaminayey madaxweynaha dawladda Puntland ayaa intii ay ku sugnaayeen Bossaso kulamo la yeeshay heerarka maamul ee gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland, iyadoo la isla hogo-tusaaleeyey arrimo dhawr ah oo amnigu ugu horreeyey.
Waxaa la filayaa R/wasaaraha iyo waftigiisu inta aysan ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee magaalada Bossaso in ay la hadlaan warbaahinta, kana xog-warramayaan ujeeddooyinkoodii socdaal iyo waxa uga qabsoomay.
Waftigaan maanta ka dhoofaya Bossaso ayaa Puntland soo gaaray 21-kii bishaan December si ay uga qayb noqdaan shirkii wadatashiga arrimaha dastuurka ee dhawaan ku soo idlaaday magaalada Garowe.
R/wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cali Khaliif Galaydh oo yimid Taleex, kulamana la qaatay odoyaasha dhaqanka iyo guddiga qabanqaabada shirka Khaatumo II.